Transportgbọ njem ọha na eze na Luxembourg? Ọ ga-eme n’ezie?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Transportgbọ njem ọha na eze na Luxembourg? Ọ ga-eme n’ezie?
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Luxembourg • News • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Luxembourg Tourism abụghị naanị onye na-achọ ịgwọ ndị ọbịa na obodo ha. Ihe karịrị 600,000 Luxembourg nwa afọ ga-asị bye bọs na ụgbọ oloko na mba ha, ebe Luxembourg nọ n'okporo ụzọ ya ịghọ mba mbụ ebe ụgbọ njem ọha na eze anaghị akwụ ụgwọ.
Luxembourg bụ obere mba Europe, onye so na European Union na akụkụ nke mpaghara Schengen. Obodo ahụ gbara Belgium, France na Germany gburugburu. Ọ bụ ọtụtụ ime obodo, nwere oke ọhịa Ardennes na ogige ntụrụndụ ndị dị na mgbago ugwu, okwute okwute nke mpaghara Mullerthal dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ na ndagwurugwu Osimiri Moselle na ndịda ọwụwa anyanwụ. Isi obodo ya, Luxembourg City, bụ nke a ma ama maka obodo ochie ya ochie nke e wusiri ike na ugwu.
Ebe atụmatụ ịga n'ihu maka Luxembourg iji nye ndị njem ọha na eze nkwado ego na Machị 2020, ndị ọrụ mmekọrịta Syprolux na-akwụsi ike na mbugharị ahụ.
Naanị ndị nnọchiteanya 16, Syprolux bụ otu n'ime ndị ọrụ ọrụ pere mpe, mana dịka onye isi ala Mylène Bianchy si kwuo, ọ bụkwa 'snappiest', njikwa ya siri ike na nnọkọ. Njikọ ahụ kwụgidere n'eziokwu na ọ na-ajụ ajụjụ ihe ọ dị mkpa ịjụ, ndị otu ya nwere arụmụka siri ike.
N'etiti ajụjụ ndị e welitere bụ amaghị nke otu a ga-esi gbakọ ụgwọ ụgbọ gafere, yana ma ndị ọrụ gafere ókèala ga-anwa ịbanye n'ụgbọ oloko na Grand Duchy n'agbanyeghị ogige na mpaghara ịgba ọsọ na-agabeghị na mpaghara. O dozikwara ka ndị na-eduzi ụgbọ oloko kwesịrị isi meghachi omume ma ọ bụrụ na ha enwee ihe isi ike na onye ahịa ebe tiketi enweghị ike ijide. Ndị otu azụmahịa na-eche ma ị ga-akwụsị ụgbọ oloko ma chere ka ndị uwe ojii bịarute bụ ụzọ kachasị mma ịga n'ihu n'okwu ahụ.
Otu n’ime mkpebi ụbọchị ahụ bụ ka a chọọ ndị uwe ojii na-ebugharị ndị njem. Ndị mmadụ n'otu n'otu na Syprolux gosipụtara okwu banyere enweghị ezigbo ụgbọ oloko dị maka ibuga ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ahịa. Otu ajụjụ siri ike, ya bụ ma a ga-ahapụ ndị ọrụ ụgbọ oloko ka ha anabata ụgbọ oloko karịrị akarị?
Okwu ọzọ bụ ụba ụlọ na ọrụ okporo ụzọ, ọtụtụ n'ime ha bụ atụmatụ maka afọ ise na-esote. Bianchy jụrụ otu ndị ndọrọndọrọ ọchịchị nwere ike isi kwusi nkwụsịtụ ụgbọ oloko maka ndị na-azụta klaasị nke klaasị mbụ, ihe ruru € 660 maka njem kwa afọ ma ọ bụrụ na ha ga-eji bọs dochie anya ọnwa maka oge ụgbọ oloko.
Ndị otu na-ahụkarị ọrụ gbasara ọdịmma ndị ọrụ. Ajuju bilitere ma a ga-echekwa usoro nchekwa na ogo. Na mgbakwunye, CFL na-enwe ihe isi ike n'ịchọta profaịlụ kwekọrọ na ụlọ ọrụ ọhụrụ, na-ebute enweghị ndị ọrụ.